SEO အကြောင်းသိရန်သင်လိုအပ်သမျှ - Semalt Expert
Search Engine Optimization သည် ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းအရာအမျိုးအစားများကိုရှာဖွေသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင် from ည့်သည်များမှအသွားအလာရရှိသည်။ SEO ဆိုသည်မှာအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒီဇိုင်း၏သိသာသောရှုထောင့်များနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်၊ ကွန်ရက်စာမျက်နှာများသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် algorithm အား SERPs တွင်အဆင့်များသတ်မှတ်သည့်နည်းဖြင့်၎င်းတို့၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုလွှမ်းမိုးလေ့ရှိသည်။ SEO သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၌အချို့သောရှာဖွေရေးဝေါဟာရများအတွက်အဆင်သင့်အနေအထားကိုရရှိစေနိုင်သည်။ အောင်မြင်သောကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များအတွက် SEO ဆိုဒ်များမြောက်များစွာရှိသည်။ Lisa Mitchell, Semalt Customer Customer Success Manager, သင်သိထားရန်လိုအပ်သောအကောင်းဆုံးအရာများမှာ -
၁။ အကြောင်းအရာကောင်းကိုဖန်တီးပါ။ ပါ ၀ င်မှုနှင့်သက်ဆိုင်မှုသည်ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များပေါ်တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်သင့်နယ်ပယ်တွင်သက်ဆိုင်ရာအပြင်အာဏာပိုင်များကိုပါရေးသားသင့်သည်။ ရှာဖွေရေးယန္တရားသည်သင့်အကြောင်းအရာပါသောသော့ချက်စာလုံးများ၏ SERP တွင်သင့်ကိုအဆင့်မြင့်နိုင်သည်။
2. UX ကအရေးကြီးတယ်။ ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုဆွဲဆောင်နိုင်အောင်စာမျက်နှာ layout ကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္playsကနေပါဝင်တယ်။ အသုံးပြုသူသည်ဆွဲဆောင်မှုမရှိသောဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကောင်းမွန်သောအသွင်အပြင်ရှိသော site ပေါ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအချိန်များများရလေ့ရှိသည်။ UX သည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကို Google Search Page တွင်ပထမဆုံးပေါ်စေနိုင်သည့်အဆင့်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဒီဇိုင်းအပေါ်တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောထိတွေ့မှုတစ်ခုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စဉ်းစားသင့်သည်။
3. Backlinking အရေးကြီးပါသည်။ သော့ချက်စာလုံးများရှာဖွေခြင်းကဲ့သို့သောအခြား SEO လုပ်ဆောင်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၊ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများတွင်လျှောက်ထားရန်အတွက်မှန်ကန်သောနောက်ပြန်ချိတ်ဆက်မှုများဖန်တီးရန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုညွှန်းသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများကသင်၏ဒိုမိန်း၏အခွင့်အာဏာကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်တွင်ထင်ရှားစေသည်။ post ည့်သည်များတင်ခြင်းနှင့်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းများသို့လှူဒါန်းခြင်းကဲ့သို့သောအသုံး ၀ င်သည့် SEO လုပ်ငန်းဆောင်တာများမှရသောအသွားအလာမှသင်အကျိုးရနိုင်သည်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၏ 4. ပါဝါ။ SEO ကိုလုပ်ဆောင်သည့်အခါစီးပွားရေးဆိုင်ရာမက်ထရစ်ကိုပေးသောကိရိယာအချို့သည် ၀ က်ဘ်မာစတာအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏ SEO စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး ၏တိုးတက်မှုကိုဤကိရိယာများကို သုံး၍ သင်စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဤကိရိယာများအလုပ်လုပ်ပုံကိုလိုအပ်သည့်ချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်၏နယ်ပယ်တွင်လွှမ်းမိုးခြင်းသည်သင်၏အဓိက ၀ င်ပြိုင်သူများနှင့်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာအလုပ်လုပ်ပုံကိုဆန့်ကျင်ရန်လွယ်ကူသည်။ SEO စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွင်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုကြီးထွားစေသည့်အကျိုးကျေးဇူးများစွာကိုသင်ရနိုင်သည်။
၅ ။ သတင်းအချက်အလက်ဗိုင်းရပ်စ်မည်သို့ရရှိနိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာမျှဝေခြင်းဖြစ်သည်။ လူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များသည်ဗိုင်းရပ်စ်ပါဝင်မှုကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြင့်သူတို့၏ဝင်ငွေကိုရရှိစေသည်။ အသုံးပြုသူများသည်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့စိတ်ဝင်စားသူများ၏ကွန်ယက်များမှတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
၆။ အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုသည် SEO ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်စျေးကွက်သမားများကသူတို့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများတွင်အသုံးချသင့်သည့်အရေးကြီးသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အတွက်အကြောင်းအရာများကိုရေးသားသည့်အခါအောင်မြင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ကသာခြုံငုံ SEO ဆိုသည်မှာလုပ်ငန်းစဉ်၏ထက်ဝက်အဘို့ပါဝငျသညျ။
၇။ Google ပြစ်ဒဏ်များကိုရှောင်ပါ။ Black Hat SEO သည် သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရတင်းကြပ်စွာပေးဆပ်နိုင်သည်။ သော့ချက်စာလုံးထိုးခြင်းကဲ့သို့သောတရားမဝင်သောနည်းပရိယာယ်များကိုရှောင်ပါ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်လူကြီးမင်း၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်လူများအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပုံစံကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။